फेसबुक विज्ञापनले %००% अधिग्रहण लाभमा पुर्‍याउँछ
मेरो स्वामित्वमा रहेको साइटहरू मध्ये एक हो NavyVets.com। यो एक साइट हो जुन नजिक छ र मेरो हृदयलाई प्रिय छ। मेरो बुबा र म दुबैले यसको व्यवस्थापन गर्छौं र हामी यसलाई एक नाफा नकमाउने संस्था बनाउने आशा गरिरहेका छौं जुन भेटेरन्सलाई मद्दत गर्दछ। पछिल्ला केही वर्षहरुका लागि, यो एक (रमाईलो) खर्च भएको छ, यद्यपि। अधिग्रहण स्थिर र बिस्तारै द्रुत गतिमा भएको छ, हामी २,2,500०० भन्दा बढी सदस्यहरूसम्म छौं र एक महिनामा 75 XNUMX जना जम्मा गर्दैछौं।
मैले सुरु नगरे सम्म फेसबुक विज्ञापन.
पहिलो कदम मैले लिएको मेरो Ning नेटवर्क को गतिविधि फीड एक एकीकृत थियो नेवी वेटरन फेसबुक पेज। त्यो धेरै गतिविधि संग एक महान फेसबुक पेज प्रदान।
अर्को चरणले एक बजेट सेट गरिरहेको थियो र फेसबुकमा जो कोहीलाई लक्षित गरेको थियो नौसेना तिनीहरूको रुचिमा। यो एक विशाल समुदाय हो, ,60,000०,००० भन्दा बढी सक्रिय लक्ष्यहरूको साथ! मैले मेरो बजेट प्रति दिन $ 40 मा सेट गरें र अभियान शुरू गरें। १ days दिनमा, मैले फेसबुक पृष्ठमा २०० ~ २०० को लागतमा १,१०० भन्दा बढी फ्यानहरू थपेको छु। लगभग 17०० ले वास्तवमै विज्ञापनमा क्लिक गरेको छ, त्यसैले अरू केहि सयौं फेसबुक वाल मार्फत व्यावहारिक रूपमा प्राप्त गरियो। हाम्रो प्रति क्लिक लागत $ ०.२1,100 को बारेमा छ र हाम्रो क्लिक-थ्रु दर rate200०,००० भन्दा बढी प्रभावहरूको साथ ०.२२% (मैले चाहेको भन्दा कम) हो।
मैले सदस्यता सबमिशनको लागि गुगल एनालिटिक्समा एक लक्ष्य सेट गरें, यहाँ छ साप्ताहिक परिणामहरू:
ट्रिक-डाउन प्रभाव छ। जहाँ हामी एक महिनामा 75 100 जना नयाँ सदस्यहरू थप्दै थियौं, हामी अब प्रति हप्ता १०० सम्ममा छौं! सामाजिक नेटवर्कमा राजस्व हाल प्रति सदस्य $ ०.०0.08 को बारेमा छ, त्यसैले यस प्रयासमा लगानीमा सकारात्मक प्रतिफल छ। एक बर्ष भित्र, सदस्य को लागत को लागी प्रत्यक्ष भुक्तान गरीन्छ।
साइट लोकप्रियताको रूपमा बढ्दै जाँदा, विज्ञापन राजस्व अप्रत्यक्ष रूपमा साथै वृद्धि हुनेछ, त्यसैले हामीले कम समयमा लागतहरू फिर्ता लिनुपर्दछ। फेसबुक विज्ञापनको लक्ष्यीकरण वास्तवमै के हो जसले हामीलाई यो लागत प्रभावी रूपमा गर्न सक्षम बनायो। मेरो विचारमा त्यहाँ केही विडंबना छ कि हामी वास्तवमै सदस्यहरुका लागि फेसबुकलाई पोच गर्दैछौं NavyVets.com मा आउन, तर यो एक सेवा हो जुन हामीले तिर्दैछौं, फेसबुक अनुमान गर्दिन।
दैनिक क्लिक-थ्रू दर (CTR) फेसबुक विज्ञापन अभियान मा:
फेसबुक विज्ञापनको अर्को अर्को राम्रो सुविधा भनेको यो हो कि विज्ञापन एक सदस्यमा रोकिन्छ जो पृष्ठको फ्यान बनेको छ ... हामीलाई अनावश्यक प्रभावहरू बचत गर्दै। यो धेरै राम्रो विज्ञापन प्याकेज हो। म चाहन्छु कि त्यसले दिनहरू, रातहरू र हप्ताको दिनहरू सम्म फिल्टरिंग थप्यो - तर यो राम्ररी काम गरिरहेको छ!
टैग: अधिग्रहणफेसबुक विज्ञापनहरूनौसेना भेडाहरूनेभेट्स